राजनीति Archives - Merodesh.news
काठमाडौं, २४ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी सर्मा ओलीले ७१औँ विश्व मानव अधिकार दिवसको असवरमा शुभकामना दिएका छन् । ओलीले मंगलबार विश्व मानव अधिकार दिवसको अवसरमा लिखित शुभाकामना सर्वाजनिक गरेका हुन् । मानव अधिकारको उल्लंघन हुन...
काठमाडौं २३ मंसिर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले २९ मंसिरमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका पहिलो बरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले स्थायी...
विराटनगर, २३ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले पार्टीको महाधिवेशन एक वर्ष सर्ने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा सोमबार पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । महामन्त्री कोइरालाले...
मन्त्रीको ठाडाे आदेशमा अस्पतालमा कर्मचारी भर्ना, नासु नवराज लुइँटेलको नियुक्तिको फाइल गायब
विराटनगर, २३ मंसिर । १ नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको ठाडो आदेशमा कोशी अस्पतालमा कर्मचारी नियुक्त भएको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले निष्कर्ष निकालेको छ । नियमसम्बद रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भएपनि राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा कर्मचारी...
काठमाडौं २३ मंसिर । आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक बस्दै छ । कार्यकारी अधिकार पाएपछि पाँचमहिने कार्ययोजना बनाइरहेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो वरीयताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेर बैठक बोलाएका छन् ।...
काठमाडौं, २९ माघ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस दुवै असफल भएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा उनले...
विराटनगर । तत्कालीन माओवादीले ‘सशस्त्र युद्ध’ थालेको दिन फागुन १ लाई नेकपाले देशभरि जनयुद्धका सहिदहरूलाई सम्झना गर्दै स्मृति दिवसका रूपमा मनाउने भएको छ । तत्कालिन माओवादीले ‘जनयुद्ध दिवस’को रूपमा मनाउने फागुन १ गतेलाई नेकपाले सहिद...
नेतृत्वले नैतिकता गुमाएकै कारण संसदमा कांग्रेसको भूमिका कमजोर : डा. शेखर कोइराला
विराटनगर। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्वले नैतिकता गुमाएकै कारण संसदमा कांग्रेसको भूमिका कमजोर भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस विराटनगर महानगर समितिले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोइरालाले आफूसँग नैतिकता नभएसम्म अरुको नैतिकताका...
सरकारको विरोधमा तरुण दलको प्रदर्शन, सातै प्रदेशमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी
विराटनगर । कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको विरुद्ध काँग्रेस भ्रातृ संगठन तरुण दलले आन्दोलन सुरु गरेको हो । सरकारको काम प्रति अशन्तुष्ठी जनाउदै तरुण दलले विराटनगरबाट सरकार विरोधी आन्दोलन सुरु गरेको हो ।...
काठमाडौं । एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले वाईडबडी विमान खरिद प्रकरण पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा, र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा र सहमतिमा भएको देखा परेको...